Itoophiyaa fi Eertiraan Kubbaa Miilaa Waliin Tapachuuf Kophii Jiran
WASHINGTON,DC — Itoophiyaa fi Eerirtaan waan ganna hedduu asitti tahanii hin beenne dorgommii African Nations Championship ykn Shaampiyoonaa Biyyoota Afrikaa irratti dhiyoottuu waliin taphachuuf qophii jiran.
Dorgommiin jarii kun irratti waliin taphatu ganna sadiin duratti jalqabde garee 16 taphata. Konfidereshiinii kubbaa miilaa Afrikaa jala jirti.Gareeleen kubbaa miilaa Afrikaa jajjaboo jedhan ykn ka hujii kubbaa miilaa kanaan akka dansaa jiranitti taphata.
Itoophiyaa fi Eritaan carraa Naayroobiitti fuudhanitti waliin taphachiisaa dorgommii waancaa Afrikaa Ammajii dhuftu jalqabduun duratti taphachuuf qophii jiran.
Gama kaaniin ammoo CECAFA,Waldaan Kubbaa Miilaa biyya Afrikaa gama Bahaatii fi Gama Jidduu oowwaa deemuutti jirrti.Itoophiyaa fi Ugaandaa tapha jalqabaa moohatanii durumattui yaahuutti jiran.
Itoophiyaan Suudan Kibbaa 1-0,Ugaandaan Keenyaa 1-0 moohatan.Burudniin Somaalee 5-1 moohatte.
Gama kaaniin ammoo dorgommii kubbaa miilaa La Liigaa Barceloonaatti goolii hedduun dura jiraa ka Engliish Pireemiyeeritti ammoo Manchester Yuniteditti tokkessoo.Tana fakkaatti oduun Ispoortii hardhaa.